आफ्नै दूध बेचेर यी महिला बनिन् लखपति ! कसले किन्छ उनको दुध ? – www.agnijwala.com
आफ्नै दूध बेचेर यी महिला बनिन् लखपति ! कसले किन्छ उनको दुध ?
एजेन्सी ,काठमाडौं । नेपालमा गाइभैसीको दुधले पनि राम्रो बजार पाउँन नसकेको अवस्थामा एक महिलाले आफ्नै दुध बेजेर लाखौं कमाउँछिन भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । हामिले गाइ भैसीको दूध बेचेको त सुनेका छौ तर मान्छेको दूध बेचेको भने पक्कै सुनेका छैनौ । एक महिलाले आफ्नो दूध बेचेर लाखौं कमाइन भन्दा अच्चम लाग्नु सामान्य जस्तैं हो ।
तर साइप्रसकी राफाएला लान्प्रोउले आफ्नो दूध बेचेर लाखौं कमाएकी छन् । राफाएला लान्प्रोउका दुई बच्चा छन् । उनको ब्रेस्ट मिल्क बडी बिल्डिङ गर्ने पुरुषकको निकै डिमाण्ड रहेको बताइएको छ । पहिलो सन्तान जन्मिएपछि धेरै दूध आएपछि चिकित्सकलाई भेटेकी उनले आवश्यकता भन्दा बढी दूध आएको थाहा पाएपछि बेच्ने निर्णयमा पुगेकी हुन् ।
आफ्नो दूध धेरै भएपछि अनलाइनमार्फत दूध बेच्ने निर्णय गरिन् । उनको दुध वेट लसदेखि बडी बिल्डिङ गर्ने मानिसले अनलाईन मार्फत किन्ने गरेका जनाएकी छिन ।